Sidee falanqaynta u hesho dhammaan macluumaadkaas? | Martech Zone
Sidee falanqaynta u hesho dhammaan macluumaadkaas?
Axad, Maarso 29, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Toddobaadkan dhammaadkiisa waan jilicsanaa (sidii caadiga ahayd). Ma fiicnaan laheyd haddii aad furi laheyd Google Analytics oo aad aragto inta qof ee akhriyaya quudintaada RSS? Si kastaba ha noqotee, kuwani wali waxay booqashooyin ku yihiin boggaaga iyo waxyaabaha ku jira, miyaanay ahayn? Dhibaatadu, dabcan, waa in quudinta RSS aysan u oggolaanayn in koodh la fuliyo marka mawduucaagu furmayo (nooc ka mid ah). Si kastaba ha noqotee, boggaaga internetka ayaa sidaas sameeya.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka barato Falanqaynta Webka, waxaan kugula talin lahaa hal buug iyo hal buug oo keliya, Avinash Kaushik's buugga, Falanqaynta Webka Saacad Maalin ah. Avinash wuxuu si cad u sharaxayaa sababta aan uga guurnay dhanka server-ka Analytics dhinaca macmiilka Analytics iyo sidoo kale caqabadaha mid walba leh.
Waa kuwan muunad ka mid ah codsiga muuqaalka iyo isbeddelada querystring:
Waxaan isku dayay inaan ururiyo dhamaan doorsoomayaasha querystring anigoo baaraya farabadan oo kaladuwan websites:
utmac = "Lambarka Koontada"
utmcc = “Kukiyada”
utmdt = "Cinwaanka Bogga"
utmfl = "Nooca Flash"
utmhn = “Codso Magaca martida”
utmn = "Number Random - oo loo sameeyay __utm.gif kasta oo la garaaco loona isticmaalo kahortagga qafiska 'gif hit'
utmp = "Bogga - bogga codsiga iyo xuduudaha weydiinta"
utmr = "Ugudbinta isha (tixraaca url | - | 0)"
utmsc = "Midabada Shaashadda"
utmsr = "Xalinta Shaashadda"
utmt = "Nooca .gif hit (tran | item | imp | var)"
utmul = "Luqad (lang | lang-CO | -)"
utmwv = "Nooca UTM"
utmctm = Habka Ololaha (0 | 1)
utmcto = Wakhtiga Ololaha
utmctr = Muddada Raadinta
utmccn = Magaca Ololaha
utmcmd = Ololaha Dhexdhexaad (toos ah), (dabiici ah), (midna)
utmcsr = Ilaha Ololaha
utmcct = Mawduuca Ololaha
utmcid = Aqoonsi Olole
Ma hubo dhowr ka mid ah… mana aqaano haddii ay jiraan wax intaa ka badan, laakiin kuwani waa kuwo waxtar badan leh haddii aad rabto inaad si wada jir ah u wada jabsato codsigaaga sawir si aad u diiwaangeliso xog dheeraad ah koontadaada Google Analytics - tusaale ahaan… macaamiishaada RSS!
Maanta waxaan tijaabinayaa aragtidayda… Waxaan diyaariyey codsi sawir waa in u gudub RSS adeegsiga Google Analytics. Caqabada hortaagan ayaa ah, maadaama aysan jirin cookie ama aqoonsi codsi gaar ah. Macmiil waayeen fur isla quudinta isla markaana ka diiwaan galiso hits badan Google Analytics. Waan sii wadi doonaa hagaajinta, in kastoo, oo aan arko haddii aan la imaan karo wax aad u adag.
Waa tan codsigeyga sawir… Waxaan isticmaalayaa kan PostPost plugin WordPress Waxaan horumariyay oo aan dhigayaa noodhka ka dib waxyaabaha ku jira quudinta:
Hal qoraal, tani waxay cabbiraysaa hits, ma ahan macaamiisha! Haddii aad rabto inaad isku daydo inaad cabirto Macaamiisha, waxaan kugula talin lahaa dhacdo onclick ah astaantaada RSS. Dabcan, taasi waxay tabeysaa qof kasta oo ku soo qoraya macluumaadka isku xirka cinwaankaaga… marka si daacadnimo ah xitaa iskama dayin. Haddii aad waxoogaa fikrado ah ka hayso waxa aan qabanayo ama sida loo horumarin karo, ii soo sheeg!
Tags: effka faa'iideyso pinterestsicirka-ku-gaadhiga wareegaprint
Beenta Xun ee Warbaahinta Bulshada Gurus Weave
Ma isticmaali kareysay kaliya feedburner.com? Maaddaama Google ay iibsatay istaatistikadu waxay u badan tahay in lagu dari doono Google Analytics si dhakhso leh… sanadkan waxaan rajeynayaa!
Haa, waxaan u adeegsadaa Feedburner hadda si aan u cabbiro quudintayda. Si kastaba ha noqotee, ma jecli dib u dhaca daabacaadda ee Feedburner oo si daacadnimo ah ayaan u necbahay falanqaynta ku jirta iyo sida ay u muujiso koritaanka iyo isticmaalka.
Ma aanan maqal inay raadinayaan istaatistiiska Feedburner ee Google Analytics - laakiin taasi way fiicnaan laheyd!
Layaabi maayo haddii GA uu tan ku daro mustaqbalka… kaliya macquul ah maadaama Google uu leeyahay Feedburner… waana ku qanacsanahay inaadan ahayn qofkii ugu horreeyay ee tan iskudaya.
Tani ma jebinayso mid ka mid ah shuruudaha adeegsiga miyaa? Waan necbahay inaan ogaado in layga mamnuucay Google Analytics anigoo adeegsanaya adeegeyaashooda qaab aan caadi ahayn (yacni codsiyada Img).
Sidoo kale haddii ay beddelaan API-kooda (ie kala-soocidda, tirada xuduudaha, iwm, way kala jebi doontaa midig)
Way fiicantahay inaad tan ku sameyso shey tijaabo ah!
Jul 6, 2009 markay tahay 12:15 PM